FAMPANDROSOANA finday - Fikarohana ny Landscape Mobile. Martech Zone
Alarobia, Martsa 20, 2013 Adam Small
Fampiharana finday avo lenta kokoa noho ny zazakely? Misy zavatra momba izany toa mampatahotra kely… ary mahatalanjona miaraka amin'izay. Amin'ny fandinihana ny tontolon'ny fampiharana dia toa misy lalao iray taonina, saingy taraiky ao aoriana ireo fampiharana mamokatra orinasa. Azoko antoka fa ho hitanao ireo tarehimarika ireo hifanakaiky kokoa amin'ny ho avy, na izany aza, satria mihamaro ny orinasam-pandraharahana mampiasa ny paikadin'ny finday ho isan'ny raharaham-barotra isan'andro.
Tsy lazaina intsony fa ny finday avo lenta sy ny finday hafa dia nahatratra ny ambaratongam-piainana rehetra. Ampiasainay isan'andro izy ireo, amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny, hatramin'ny fanamarinana ny kaonty any amin'ny banky, ny fanafarana pizza ary maro hafa. Ary miaraka amin'ireo fampiharana 1.5 tapitrisa mahery hita ao amin'ny Apple App Store sy Google Play, ny mpanjifa dia manana safidy saika tsy voafetra hisafidianana. Avy amin'ny New Relic infographic, FAMPANDROSOANA finday: Maninona ny ho avy dia finday.
Tags: Sary torohayfinday fampiharanaantso amin'ny findayNew Relic
Ny loza ateraky ny SEO sy ny fomba fampiharana paikady tsy misy fotony